दाँतको सफाइमा नरम ब्रश प्रयोग गर्नुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता दाँतको सफाइमा नरम ब्रश प्रयोग गर्नुपर्छ
on: April 20, 2018 अन्तरवार्ता
दाँतको सफाइमा नरम ब्रश प्रयोग गर्नुपर्छ
मानिसको सुन्दरतासँग दाँतको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । तर, अधिकांशले दाँतको स्वास्थ्यमा भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । अन्य रोगका लागि संवेदनशील भएर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेहरू दन्त परीक्षणलाई भने प्राथमिकता दिँदैनन् । यस कारण दाँतका रोगीहरू चिकित्सककोमा आइपुग्दासम्म समस्या जटिल बनिसक्ने दन्तरोग विशेषज्ञहरूको अनुभव छ । वीर अस्पतालछेउको वेल डेण्टल क्लिनिकमा दैनिक ८–१० जनाको दन्त परीक्षण/उपचार गर्दै आएकी डा. सुरक्षा कटुवालले दाँतको स्वास्थ्यबारे अझै धेरै चेतना बढाउनुपर्ने औंल्याइन् । प्रस्तुत छ, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजबाट बीडीएस गरेकी डा. कटुवालसँग आर्थिक अभियानका रञ्जु काफ्लेले गरेको कुराकानीको सार :
के कारणले दाँतको समस्या हुन्छ ?
मुखको सरसफाइमा ध्यान नदिँदा दाँतमा समस्या हुन्छ । हामीले खाएको खानेकुरा दाँतको चेपचेपमा अड्किएर बस्छ । त्यसरी रहेको खानाको टुक्रामा क्रमशः ब्याक्टेरिया बन्छ र त्यसकै कारण अन्य धेरै समस्या आउँछ । त्यसैले, खानेकुरा खाएपछि नरम ब्रशले दाँतको भित्र–बाहिर सफा गर्नुपर्छ । यस्तो समस्या कतिपय अवस्थामा दाँतको बनावट (एनाटोमी)मा पनि भर पर्छ । अलि ठूला दाँत र चपाउन बनेका चेम्बरका खाल्टा ठूला छन् भने पनि थुक (सलाएबा)ले त्यसलाई सफा पार्न सक्दैन, परिणामस्वरूप दाँतको समस्या देखिन्छ ।
दाँतमा के कस्तो समस्या देखिन्छ ?
मुख्यगरी दाँत दुख्ने, गिजा सुन्निने, रगत आउने, हल्लिने, दाँतको रङ कालो हुने, खिइने, अमिलो–चिसो खाँदा सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउँछ । नियमित परीक्षण गर्ने हो भने दाँतमा के भएको हो, पत्ता लगाउन सकिन्छ । कलिलो उमेरका बालबालिकाको दाँत सेतो र वयस्कको दाँत केही पहेलो हुनुपर्छ । तर, दाँत कालोपना आउनु समस्या हो ।
दाँत दुखेर मुख खोल्नै नसक्ने, मुख खोल्दा गन्हाएर आफैलाई असहज हुने अवस्था नआउँदासम्म कोही पनि अस्पताल जाँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा दाँत उखेल्नुपर्ने, चार–पाँच पटकसम्म डाक्टरकोमा धाउनुपर्ने र धेरै खर्च गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । उखेलिएको दाँतमा पीडा धेरै हुन्छ । त्यस्तो दाँत भर्न पनि समय लाग्छ ।
दाँतको समस्याको कारण के हो त ?
यसको मुख्य कारण ओरल हाइजिन (मुख÷दाँतको स्वास्थ्य) नहुनु हो । नियमित मुख सफा गर्ने, दाँतको भित्र–बाहिर दुवैतिर सफा हुनेगरी कुल्ला गर्ने र ब्रश गर्नेलाई समस्या हुँदैन । तर, दाँतको सफाइमा ध्यान नदिने, कडा खालको ब्रशले दाँत माझ्ने र अन्य पक्षमा ध्यान नदिनेलाई यस्तो समस्या हुन्छ । दाँतमा क्याबिटी (किरा) लाग्ने समस्या पनि धेरै नै छ । क्याबिटी भएपछि सफा मात्र गरेर पुग्दैन, उखेल्नैपर्छ । उखेल्दा वरिपरिका अन्य दाँत प्रभावित हुन्छन् । आरसीटी गरेका दाँतमा क्याप लगाउनुपर्छ ।
दाँत माझ्ने ब्रशकै कारण पनि समस्या हुन्छ भन्नुभयो । यसबारे अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?
हो । दाँत सफा गर्न बजारमा तीन किसिमका ब्रश उपलब्ध हुन्छन् । एउटा अत्यन्त कडा हुन्छ । त्यस्तो कडा ब्रशले दाँत सफा गर्दा गिजा कोतरिने, घाउ हुने, रगत आउने, दुख्ने हुन सक्छ । दाँतको बाहिरी भागको इनामेल पनि घोटिँदै जान्छ । अर्काे मध्यम खालको हुन्छ । र, अत्यन्त नरम खालका ब्रश पनि बजारमा पाइन्छन् । दाँतलाई मुखसँग जोड्ने छाला अत्यन्त नरम हुन्छ । त्यसैले, ब्रश पनि नरम नै उपयुक्त मानिन्छ । ब्रशलाई बेला बेला फेर्ने गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म एउटै ब्रशले माझ्ने, ब्रशको गुणस्तरमा ध्यान नदिने गर्दा पनि दाँतमा समस्या हुन्छ ।
समस्या भएको कसरी थाहा पाउने ?
शुरुआती चरणको समस्यालाई आफैले थाहा पाउन सकिँदैन । परीक्षणका क्रममाः चिकित्सकले मात्र थाहा पाउन सक्छन् । जबसम्म समस्या जटिल बन्दैन, त्यतिन्जेल दाँत/मुखमा पीडा हुँदैन । त्यसैले, हामी आफैले घरमा बसेर थाहा पाउन सक्दैनौं ।
दाँतको जराबाट गिजाले ठाउँ छोड्दै गएपछि मात्र केही थाहा हुन्छ । समस्या जरैसम्म पुगेपछि भने सिरिङ–सिरिङ हुने, दुख्ने सुन्निने हुन्छ ।
उपचारका लागि दाँतका कस्ता बिरामी बढी आउने गर्छन् ?
सबैखाले सेवाग्राही दन्त परीक्षण गर्न आउनुहुन्छ । म दिनमा ८–१० जनाको दन्त परीक्षण गर्छु । बढी मात्रामा सुन्दरतासँग सरोकार राख्ने युवायुवती बाङ्गो÷नमिलेको दाँत सोझो पार्न, मिलाउन, दाँतको रङ चम्किलो बनाउन भन्दै आउनुहुन्छ । यसरी आउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । दुख्ने, मुख गन्हाउने, दाँत कालो हुने, खिइने समस्या लिएर आउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ । दाँत नै नभएकाहरू दाँत राख्न आउनुहुन्छ ।
दाँतको उपचारमा कस्तो प्रविधि प्रयोग हुँदै आएको छ ?
ओरल केयरिजका लागि प्रयोग हुने टेक्नोलोजी त हेण्डस्केलिङ, अल्ट्रासोनिक मेशिन, लेजर र इण्डो मिटर जडान भएका हाते उपकरण नै हुन् । नेपालका क्लिनिकमा यिनै प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ/गराइन्छ । हामीले दैनिक सेवा प्रवाह पनि यस्तै प्रविधिबाट गर्छौं । दाँत उखेलेको ठाउँमा आरसीटी गरिन्छ, दाँत नभएकालाई आरपीडी गरिन्छ, अनि पूरै दाँत नभएकालाई सीडी गरिन्छ ।
दाँतको उपचार घरमै पनि गर्न सकिन्छ ?
समस्याग्रस्त हुनुभन्दा पनि समस्या आउनै नदिनु राम्रो उपाय हो । दाँतलाई घरमा उपचार गर्ने भनेको हेरचाह हो । समस्या आयो भने चिकित्सककोमै जानुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार काम गरियो भने समस्या जटिल बन्न पाउँदैन । उपचारमा पनि सहज हुन्छ ।
दाँतमा समस्या आउन नदिन के गर्नुपर्छ ?
मुख र दाँतको सफाइमा ध्यान दिँदा धेरै हदसम्म समस्या आउँदैन । खानेकुरा जथाभावी खाँदा, चोटपटक लाग्दा पनि समस्या आउँछ । त्यसैले, दाँतको स्वास्थ्यमा सचेत रहने, सक्दो सफा राख्ने, उपयुक्त फ्लोराइडयुक्त मञ्जन प्रयोग गर्ने, ब्रशलाई सफा राख्ने र समय समयमा फेर्ने गर्दा समस्या कम हुन्छ ।
नेपालका दन्त उपचार केन्द्रहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा छन् ?
छन् । सामान्य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका दुर्गम क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने देशका हरेक मुख्य शहरमा दन्त उपचार केन्द्र सहजै उपलब्ध छन् । काठमाडौं पोखरा, विराटनगरजस्ता ठाउँमा त यस्ता क्किनिक आवश्यकताभन्दा धेरै नै छन् ।
यस्ता उपचार केन्द्रबाट कस्ता व्यक्तिले फाइदा लिइरहेका छन् ?
दन्त उपचार केन्द्रबाट सबैले फाइदा पाउँछन् । ग्ल्यामर उद्योगमा काम गर्नेले दाँतलाई नियमित सफा गर्ने, मिलाउने गर्छन् । दाँतै नभएकाहरू नक्कली दाँत राखेर व्यक्तित्व बढाउँछन् । समस्याग्रस्त भएकाले स्वास्थ्यलाभ गर्छन् । यसरी सबैलाई फाइदा भएको देख्छु म ।
दन्त उपचार केन्द्रको पहिले र अहिले व्यावसायिक अवस्थामा पनि परिवर्तन आएको होला नि ?
अवश्य नै आएको छ । ५/६ वर्ष पहिले दाँतलाई नियमित परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नै थिएन । अहिले सेवाग्राहीको व्यवहारमा परिवर्तन आएको मैले महसूस गरेकी छु । त्यति बेला दाँतको नियमित परीक्षणबारे म आफैलाई राम्रो जानकारी थिएन । त्यसैले, नियमित परीक्षण पनि गरिनँ । अहिले पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको प्याकेजमा दाँतको सफाइ अथवा परीक्षण पर्दैन । तर, मेरो क्लिनिकमा कतिपय अभिभावक आफ्ना बच्चाबच्चीको दाँत कालो भयो भन्दै आउनुहुन्छ । यसले मुख/दाँतको स्वास्थ्यप्रति चेतना बढेको देखाउँछ ।
यसबाट हामीजस्ता प्रोफेशनलको व्यस्तता पनि बढेको छ । पहिले मेडिसिन पढ्ने थोरै विद्यार्थीले मात्र डेण्टललाई मुख्य विषयको रूपमा छनोट गर्थे । अहिले यो विषय पढ्नेहरू पनि बढेका छन् । क्लिनिक पनि खुलेकाखुल्यै छन् ।
दाँतको उपचार कत्तिको महँगो छ ?
दाँतको नियमित सफाइ, हेरचाह गरे महँगो छँदै छैन । तर, सरसफाइ नगर्ने, दाँत एकापट्टि मात्र माझ्ने, ब्रशको गुणस्तर वास्ता नगर्ने, दाउरा, कोइला जे पायो, त्यसैले माझ्ने, दाँतबाट रगत आए पनि वास्ता नगर्ने, समस्यालाई जानी–जानी ठूलो बनाउने गरेपछि कुनै पनि उपचार जटिल र महँगो हुन्छ ।